Uhlelo umsindo emotweni: ukufakwa, izici ngokwezifiso, imibono kanye nokubuyekeza
Umculo ungaphakathi ukuphila komuntu ngamunye njengokuyigugu ezibalulekile. Ososayensi baye ngaphezu kwesikhathi esisodwa wafakazela ukuthi umculo ungakwazi ukushintsha isimo ezahlukene ngokomzwelo. Lapha nalaphaya ezindaweni cindezela bese ku-intanethi kukhona amaqiniso athakazelisayo ngakho. Abantu abaningi efana umculo, ngakhoke uhlelo umsindo emotweni - kungcono into kuhle ezibalulekile, mhlawumbe ngisho wesibili emva induduzo gumbi. Namuhla inikeza ezihlukahlukene izinhlelo, kusukela okunethezeka isabelomali kanye audiophile futhi abasebenzi, kodwa izinga umsindo futhi kuncike izilungiselelo ukufakwa efanele.
Mayelana umsindo evamile
Ngeshwa, izisebenzi yomsindo neze, uma ungakhulumi mayelana "Lexus" noma BMW. Thola okungenani Dynamics ngasemnyango. Ziyakwazi kunzima ukuthola okungenani umsindo kancane bahlonipheke futhi babe izibuyekezo ngokuvamile zazo ezimbi. Abasebenzisi bathi lapho Dynamics komnyango bezinhlamvu plastic uqale dlidliza kakhulu. Ekhaya, izipikha umzimba nzima, ngakho akukho vibration. Ukuze ugweme lezi zinkinga, abakhiqizi Ususe imvamisa, okubangela vibration. Kuyinto ke ukuthi ukukhiqizwa imoto ukuba njengoba ezishibhile ngangokunokwenzeka. Kulokhu, awunayo ukwenza umnyango nzima. Kodwa lokhu kwenzeka ngisho phakathi abakhiqizi self-ukuhlonipha.
Ukuze nabanye abaningi kungcono ezahlukene. Ngokwesibonelo, isikhulumi asikhweziwe emnyango metal, Upholstery esilula. Ngaphezu kwalokho, lezi izikhulumi ngisho kusukela ingxenye isabelomali, kodwa uma ngikhuluma iqiniso ezishibhile futhi ukhwaliti ongaphakeme. Akubuzwa ukuthi uhlelo ezinjalo ezinengqondo emotweni uthatha ngokushesha kusukela kunoma iyiphi kulalela kokuba ukunambitheka umshayeli?
Izinhlobo izinhlelo ezikhona
Namuhla, zombili izinhlobo imishini ungabahlukanisa, okuyinto unomthwalo umsindo emotweni. Ngakho, kukhona izinhlelo ingxenye futhi coaxial. Abashayeli, abathandi bomculo uncamela izinhlelo ingxenye, njengoba kunenkolelo ukuthi zenziwe ngaphezulu. Coaxial Izinsiza kusebenza into yesikhathi esidlule, ngoba akakwazi ukunikeza omuhle noma okungenani umsindo evamile.
Kuyini ingxenye isikhulumi yesistimu?
Lena izipikha acoustic ibekwe ngaphandle. Uma sifeza ukufakwa ngendlela efanele, kungenzeka ukuba sifinyelele nomphumela eziyingqayizivele khona. Umshayeli bayolizwa instrument ngalinye. Ngisho engabizi uhlelo umsindo imoto uzokwazi ukunikeza high quality umsindo. Phakathi kits ethandwa singakwazi ukubona ezimbili low- kanye maphakathi no-range isikhulumi kanye ezimbili okusezingeni eliphezulu. izinhlelo Okuningi ezibizayo babe subwoofers ezengeziwe.
Ngokungafani izikhulumi ingxenye, zonke izikhulumi lapha ababebuthene kwelinye iphakethe. Ikholomu elula kungaba kuqukathe ngokuphelele isikhulumi esisodwa. Inzuzo yalesi udluliseleke - e ukufakwa elula kakhudlwana, ngaphezu, izindleko kumthengi like. Lokhu umsindo isetshenziswa namuhla, kodwa ivamile phakathi kwalabo umsindo izinga ayibalulekile. Bona lesi imishini kungaba minibuses, amaloli, nezimoto ezithwala ezishibhile.
Izinhlobo nosayizi izikhulumi
Uma udinga uhlelo oluhle umsindo emotweni, yokufuna eliphezulu kuyunithi lapha azisebenzi. Umsindo - iqoqo imishini. Lapho ekhetha impendulo acoustic belulekwa ukuba unake hhayi ifomu, futhi ubukhulu izikhulumi kulo. Ngokuvamile, izimoto eziningi kakade ube nezindawo lasikhathi sonke lokuba izikhulumi, izilinganiso okuyizinto 10, 13 no-16 cm. Lokhu yilapho isikhulumi anomzimba oyindilinga ukuma. Kukhona isikhala 15 x 23 cm, uma ukuma okweqanda.
Umsindo omuhle - it is kahle efakwe
Yebo, ncamashi. Ngokwesibonelo, izikhulumi, Midrange vibration eziyingozi kakhulu. Kufanele abethela njengoba uvalwe ngangokunokwenzeka. Khona-ke singaqiniseka onesigqi esimnandi. Uma ukufaka Kwenziwa emnyango, uyacelwa ukulungiselela imoto. Lokhu kuzosiza ukuba sifinyelele izinga evamile umsindo. Uma ukufakwa umsindo izoba ngemuva, kubalulekile ukushiya phakathi izipikha subwoofer isikhala kancane. Ngokufanele, uma izikhulumi maphakathi no-range zizobekwa iminyango misa, kanye subwoofer ebhuthini iphumele.
Tweeters isebangeni kangcono ukuza. Ukuze uqinisekise izinga umsindo kwanele izipikha phambi amabili kuphela futhi ezimbili ephezulu ogibele Racks phambi.
Professionals ukuncoma ukukhweza tweeter eduze Midrange. Nokho, ukuze lokhu kube wasika isikhumba. Khona-ke la izipikha axhunyiwe emhlabeni izibuko. Sekukonke izinga umsindo eseduze - kahle futhi ngokuphumelelayo ukufakwa ohlelweni okulalelwayo emotweni.
Kodwa okungcono - akusho the loudest. nomsindo omkhulu akusoze eliphezulu futhi ihlanzekile, futhi ngisho nomsindo omkhulu kalula kungalimaza ukuzwa kwakho. Ezinye izinhlelo ingakhishwa njengengxenye ejwayelekile kwabanye amabanga, kanti abanye kufanele ithengwe ngokwehlukana.
Bose uhlelo umsindo emotweni
Le nkampani iphayona ukukhiqizwa stereo. Imikhiqizo athandwa namuhla. Le nqubo ibizwa kanye waphenduka umqondo izinga umsindo kanye nomklamo.
uhlelo Okugcwele umsindo lokhu umakhi kungenziwa wezwa "Maybach". Kukhona uhlelo njalo. Izinga umsindo kungaba kalula uma kuqhathaniswa ukusebenza bukhoma. Ukuze audiophiles abaningi namanje akwaziwa ukuthi waphelelaphi, njengoba inkampani wenza umsindo izinga ezinjalo, naphezu kwezinkinga eziningi zangaphakathi. Bose Abezindaba System ungalalela ku amamodeli "Ferrari". Uhlelo inikeza ephelele izinga umsindo. Inani isibhakabhaka-okusezingeni eliphezulu, kodwa ayikho into engenakwenzeka abathandi umculo Wangempela. Audio kusukela kule nomkhiqizi asetshenziswa ubuchwepheshe eziphambili kakhulu ukuthi Ushintsha Umbono umculo.
boston Ukuzwakala komculo
I umsindo kungatholakala Crysler 300C. Ngakho, uhlelo 360 Watts amandla esiphezulu uyakwazi ukuhlinzeka izinga sound. Kuhlanganiswa - 7 imibhobho ifakwe izihlungi akhethekile subwoofer.
ungezwa uhlelo Mitsubishi Lancer Evolution. Lolu hlelo umsindo imoto has a amandla 650 Watts. Izinketho - 9 izikhulumi kanye subwoofer. Izinga umsindo muhle ekwelapheni ezinhle. Uhlelo uyakwazi ukuphendula izinguquko ijubane futhi kungaba nokulinganisa izinga lomsindo.
Kanjani ukuze ahlangane yomdumo emotweni: isixazululo isabelomali
imishini ezingenziwa, kodwa uThandeka - kuba ngokoqobo. Ake sithi bonke izingxenye eziyizinkulungwane 10 kuphela. Ruble. Kulokhu, izinhlelo ajwayelekile, ezibizayo, liyokhala sibi kakhulu. Ukufakwa nokusetha zikhokhelwa ngokwehlukile.
. Ngakho ayizinkulungwane 10 ukuba zisakazwe ngendlela elandelayo: 3.5 ayizinkulungwane - I-yokufuna umsakazo, 2.5 ayizinkulungwane - kuya izikhulumi phambi kanti 3.5 - ngemuva. A ruble 500. izohlala isebenza ukuthengwa izintambo acoustic nezinye izinto.
Phakathi amayunithi ikhanda Ziningi mncintiswano ngezithukuthuku imikhiqizo Chinese. Izibuyekezo belulekwa ukukhetha ephansi ekupheleni izixazululo kubaholi emakethe. Kumelwe futhi babe eqoqwe eChina, kodwa izinga umsindo iphezulu kakhulu.
Mayelana ukusebenza, kukhona ukudlala audio kusuka kunoma iyiphi zenethiwekhi, amandla kufika ku-50 W isiteshi ngamunye okukhipha umugqa, ukulungiswa of imvamisa cutoff, Equalizer nezinye izinto ezincane.
I front futhi bakhulise Izikhulumi
Lapha-ke yisona choice nzima kakhulu. Njengoba isabelomali, kodwa ukhetho izinga, ungakwazi ukuthenga imodeli kusukela Samaphayona. On ukudayiswa ungathola ezishibhile ngisho ezintathu-indlela imodeli.
Akuwona wonke imoto ngaphansi izipikha misa, kukhona izindawo, kodwa ongalishumeka bebodwa. Ukuze ruble 3000. ungakwazi ukuthenga ongakhetha obuhle amaviyo amathathu. Njengoba isibonelo, ukubheka imikhiqizo sincoma Kenwoood.
Yilokho lula kangaka, futhi cishe zaphumela elishibhile kwezimali uhlelo audio emotweni. Manje kufanele ufunde indlela ukufaka futhi ulungiselele.
Ukufakwa yomsindo izimoto
Ngisho noma imoto hhayi ifakwe ejwayelekile umsindo, zonke wiring kakade efakwe ngokwakhona. Ukuze kuyunithi obandayo, asuse cap bese ufaka unomshini wokuqopha endaweni njalo. Futhi-ke, kufanele uxhume zonke nezixhumi futhi izintambo.
Ukuze ufake isikhulumi iyadingeka ukulungiselela kusengaphambili catwalks plywood. Izibuyekezo Sisikisela pre-baphathwe izingoma isinqandakuvunda ipulangwe. kufanele wenze amalungiselelo ngaphambi kokufaka isikhulumi. Khona-ke catwalks kuthiwa screwed emnyango, izimbobo pre-yamba kuzo. Singagcina ngokubu- welule izintambo bese uxhuma kubo kuze crossover kuqala, bese ku-amplifier noma umsakazo. Ayikho into elukhuni, kodwa uma zikhona nobunzima, kungcono ukuphathisa umsebenzi ochwepheshe. Bazi kahle ukuthi ukufaka uhlelo umsindo emotweni ukuze umshayeli kwammangaza yi.
Ukufunda kusukela isibuyekezo. Umshini wokuwasha izitsha: Izinzuzo nezingozi nebubi
I-alamu yezimoto ezimbili Pandora DXL-3900: ukubuyekezwa, incazelo, ama-specs, imfundo nokubuyekezwa
Iyini isiqalo se-TV ye-digital?
Indlela ukukhetha ikhamera engcono
I-electric pelmennitsa - amadombolo anamathani
Ushanela wezindlu isishingishane hlobo. Kuyini, isimiso wokusebenza, izici, ngebuhle nebubi
Kuyini imvukuzane kwamakhemikhali? Ukuzimisela amafomula
Izithasiselo ze-antifreeze emanzini okwakha. Izinhlobo, ukusetshenziswa, isicelo
Umugqa yezimonyo French "Aveni". Cream Avene: impendulo imiphumela ukusetshenziswa
Cream "Drapolen" - Kwezinsana usizo lokuqala for ukusha kanye inabukeni amawala
Ukuhambelana zesifazane Scorpio, indoda Libra
Indlela observation eziphilayo. Ucwaningo e-Biology
Kuyini usayizi iposikhadi ejwayelekile?